Casharrada barnaamijka Arduino | Qalabka bilaashka ah
Casharka barnaamijka barashada Arduino
Arduino Waxay u badan tahay inay tahay mid ka mid ah mashaariicda ama barnaamijyada loogu talagalay software-ka iyo qalabka bilaashka ah ee ugu guusha badan iyo midka ugu saameynta badan adduunka DIY. Bulshadu waxay u sameysay labadaba barnaamij furan oo loogu talagalay barnaamijka microcontroller-ka looxyada, iyo sidoo kale looxyo qalab kaladuwan oo waliba xor u ah inay lashaqeeyaan. Dhammaan shatiyeynta shatiga GNU GPL si markaa waxyaabo badan oo lagu daro iyo kuwa ka dhasha ayaa sidoo kale la abuuri karaa.
Xaqiiqdii, waxay ku baraarugeen dhammaan warshadaha elektarooniga qalab badan, koofiyado ama gaashaan Taas oo aad ku dheereyn kartid awooda guddigaaga Arduino wixii ka dambeeya howlaheeda aasaasiga ah ee ay u fuliso sida caadiga ah. Qalabyo badan ayaa sidoo kale la bilaabay oo lagu bilaabayo ama lagu fulinayo mashaariic aad u gaar ah, sida xirmooyinka loogu talagalay robotikada, xirmooyinka mashaariicda tamarta qoraxda, xirmooyinka bilowga ah, iwm.
1 Noocyo noocee ah ayaa jira?
2 Maxaan ubaahanahay inaan bilaabo?
3 Casharrada barnaamijka Arduino:
3.1 Muxuu ku jiraa faylka soo dejintu?
3.2 Soo dejiso eBook bilaash ah iyo waxyaabo lagu daro:
Noocyo noocee ah ayaa jira?
Waxaa jira guddiyada rasmiga ah ee Arduino, in kasta oo aan bilaabayo waxaan kugula talinayaa isticmaalka Arduino UNO, taas oo ah waxa aan u adeegsado aasaaska casharka. Taargooyinka kala duwan ee aadka u taagan waa:
Arduino UNO Nolosha 3: waa ta saxan ee ugu dabacsan uguna isticmaalka badan dhammaan, lagu taliyay in lagu bilaabo. Waxay leedahay 328Mhz ATmega16 microcontroller, 2KB of SRAM iyo 32KB of flash, 14 biinanka I / O dijitaalka ah iyo 6 gasho analog.
Arduino Sababo: Waxay leedahay AT91SAM3X8E microcontroller leh 84 Mhz, 96KB oo SRAM ah, iyo 512 KB oo flash ah, marka waxaad awoodi doontaa inaad duubo barnaamijyo aad u adag oo mashaariic waaweyn ah. Sidoo kale, waxaad ka heli doontaa 54 isku xirnaanta I / O dijitaal ah iyo 12 galitaanno analog + 2 wax soo saar analog ah.
Arduino Mega: 2560Mhz ATmega16 microcontroller, 8KB of SRAM, 256KB of flash, 54 digital I / O pin iyo 16 gasho analog. Si kale haddii loo dhigo, waxay noqon laheyd nooc dhexdhexaad ah oo u dhexeeya Sababta iyo UNO, oo loogu talagalay mashaariicda kakanaanta dhexdhexaadka ah.
Arduino Lily pad: Saxan yar oo wareegsan oo u jajaban mashaariicdaada elektaroonigga ah, taasi waa, dhar la gashado oo aad dharka gashan karto. Waa wax lagu shaqaysan karo.
ArduinoMicro: Waa guddi aad u yar oo leh microcontroller waxtar yeelan kara marka boosku yahay qodob muhiim ah waxaadna u baahan tahay guddi qabsada meel yar oo aad ku geliso meel yar. Waxaa jira nooc Pro ah oo leh awoodo kor loo qaaday. Waxay ka kooban tahay 32Mhz ATmega4U16 microcontroller, iyo 20 biinanka I / O ee ay tahay inaad iibiso.
ArduinoNano: waa guddi xitaa ka yar Micro-ka, laakiin leh astaamo iyo qiimo la mid ah, oo leh micromerol-ka ATmega328.
Arduino Esplora: Way ka qaalisan tahay kuwii hore badankood, waxay ku dhisan tahay aasaaskii Leonardo, oo leh awoodo la mid ah UNO oo ahayd saxankii ugu horreeyay ee soo muuqday. Laakiin naqshaddeeda waa la cusbooneysiiyay, la dhimay oo lagu kala duwan yahay in badhamada qaarkood, joystick mini, iyo dareemayaal si toos ah loogu dhajiyay guddiga. Sidaa darteed, waa mid xiiso leh mashruucyada ciyaaraha.
Waxaad sidoo kale heli doontaa taarikada aan rasmiga ahayn, oo ay abuureen bulshada ama shirkado kale. Astaamaheeda ayaa noqon kara kuwo aad isugu eg, oo xitaa la jaan qaadi kara Arduino marka la eego barnaamijyada ama heerka elektaroonigga ah, laakiin waxaan horayba uga tagnay taas beddel ahaan xulashadaada. Kuguma talinayo inaad kubiirto dariiqyadan dariiqa ah, maxaa yeelay waxaa jiri kara waxyaabo aan is waafaqikarin mana heli doontid caawimaad badan. Sidoo kale, qaar iyaga ka mid ah ayaa si gaar ah ugu takhasusay robotikada, drones, iwm.
Dhinaca kale, waxaad leedahay qalabka elektarooniga ah taasi waxay ku siin doontaa guddigaaga Arduino awoodo dheeri ah, sida isku xirnaanta WiFi, Bluetooth, darawalada si loo xakameeyo matoorrada, iwm. Qaar ka mid ah gaashaammada ugu caansan waa:
Gaashaan Wifi: in lagu daro isku xirnaanta WiFi iyo inaad awood u yeelato inaad ku xirto mashruucaaga internetka si aad u maamusho meel fog.
Gaashaanka GSM: isku xirnaanta xogta moobiilka.
Gaashaanka Ethernet: ku xirnaanta fiilada shabakadda.
Gaashaan gaashaan: kuu ogolaanaya inaad u isticmaasho sabuurad naqshadahaaga.
Iyo wax badan dheeraad ah, sida shaashadaha, teebabka, ...
Mabda 'ahaan, bilaw,
Maxaan ubaahanahay inaan bilaabo?
Si loo bilaabo, Waxaan kugula talinayaa inaad iibsato waxyaabaha soo socda:
Bilowga Qalabka Arduino: waa xirmo bilow ah oo dhameystiran oo ay ku jirto saxan Arduino UNO, Buug aad u dhammeystiran iyo faro badan oo elektaroonik ah oo kala duwan oo ay ku shaqeeyaan (iska caabiyayaal, kaamirooyinka, shaashadda LED-ka, bandhigyada, sabuuradda rootiga, LED-yada, fiilooyinka, diooyinyada, transistors, buzzers, motors and servomotors, drivers, etc.)
Haddii aad doorato inaad iibsato mid ka mid ah taarikada kor lagu soo sheegay, maskaxda ku hay inaad u baahan tahay inaad iibsato qalabka korontada lagama maarmaan u ah mashruuc kasta kaligiis gaar ahaan dukaamada khaaska ah… Sidoo kale waa suuragal in markii aad ka faa'iideysato xirmada bilowga ah, aad xiiseyneyso inaad soo iibsato waxyaabo badan si aad u sii wadato ballaarinta mashaariicdaada ama aad ku dhaqaaqdo waxyaabo ka baxsan waxa xirmadani kuu oggolaaneyso.
Marka laga soo tago jirka, waxay sidoo kale noqon laheyd mid xiiso leh haddii aad haysato barnaamij ku filan:
Arduino bixisaa: waad awoodaa soo degso barnaamijyada kala duwan gabi ahaanba waa lacag la'aan. Casharka PDF-ka waxaan ku sharraxayaa sida loogu rakibo nidaam kasta oo qalliin iyo sida uu u shaqeeyo.
Ardublock: waa plugin kale oo Java ah oo loogu talagalay barnaamijyo badan oo sidoo kale noqon kara la soo dejiyey bilaash ah Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku shaqeyso garaaf ahaan, taasi waa, adigoo adeegsanaya baloogyo la mid ah qeybaha xujada si aad u sameyso barnaamijyadaada adigoon isticmaalin luqadda barnaamijka. Waxaas oo dhan waxaa sidoo kale lagu sharaxay PDF.
Dareemid: waa barnaamij kuu oggolaanaya inaad fuliso jilid ama noocyo ka mid ah wareegyadaada ka hor intaanad is ururin. Waa mid aad u xiiso badan oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo ka mid ah maktabadaha qalabka. Halkan ka degso.
Taas, waxaad ka heli lahayd wax ka badan ku filan si aad u bilowdo…
Casharrada barnaamijka Arduino:
In kasta oo madalku soconayay muddo sannado ah, waxaa jiri kara dhalinyaro badan ama sidaa u yar oo dhalinyaro ah oo hadda na akhriya oo raba inay ku biiraan bulshada weyn ee sameeyayaasha ah ee jira ee abuuraya mashaariic ku saleysan Arduino xilligan. Marka, haddii aad rabto inaad bilowdo barashada barnaamij ka soo bilawga iyo talaabo talaabo ah, waxaan ku siinayaa adiga a ebook bilaash ah oo ku saabsan barnaamijka Arduino. Iyada oo aad ku baran doonto wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u bilowdo dhismaha naqshadahaaga ugu horreeya ...
Muxuu ku jiraa faylka soo dejintu?
Gudaha Soo Degso ZIP waxaad ka heli doontaa dhowr faylal ah oo aad ku shaqeyso:
eBook leh casharro Arduino IDE iyo barnaamijka Ardublock ee PDF caadiga ah si aad ugu isticmaali karto kombuyutarkaaga.
eBook la mid ah kii hore, laakiin cabirkiisu ka yar yahay iyo qafiif ah oo laga isticmaalo qalabkaaga moobiilka.
Degso xiriiriyeyaasha leh programas lagama maarmaan.
Fayl leh noocyo kala duwan feylasha isha inaad isku dayi karto tusaale ahaan ama aad wax ka beddeli karto barashada. Waxaa jira labada lambar ee loo yaqaan 'Arduino IDE' iyo sidoo kale kuwa kale oo loogu talagalay Ardublock iyo xitaa lambarro qaarkood oo wada shaqeyn la leh Raspberry Pi.
Soo dejiso eBook bilaash ah iyo waxyaabo lagu daro:
Bilow soo dejinta halkan:
Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto oo aad bilowdo inaad wax la sameyso mashaariicdaadii ugu horeysay. Waad uga tagi kartaa faallooyinka naqshadahaaga ugu horreeya oo aad nala wadaagi kartaa curintaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Casharka barnaamijka barashada Arduino
Salaan Galab Wanaagsan:
Waxaad ubaahantahay inaad sameyso TESTER oo qaata laba qiime oo Capacitor iyo iska caabin ah oo barbar socda dhulka C = 470Mfx50V, R = 330k 1 / 4W, tani waxay kuxirantahay galinta iyo soosaarka 3.5 AUDIO Jack
Su’aal ah 3.5
su'aasha ku jirta arduino ma sameyn kartaa wax cabbiraya oo soo saara qiyamka,
Waxaan bilaabayaa waxaanan ku talo jiraa inaan gaadho natiijooyin wanaagsan
Jawaab Mario Piñones c.
Soo dejintaada EBOOK ee Arduino ma shaqaynayso
Ku soo jawaab Norberto
Kaliya waan isku dayay wayna ii shaqaynaysaa. Waa run in xayeysiisku uu soo baxo marka hore.
Laakiin mar labaad oo aad gujiso isku xirka ay soo dejiso.
Arduino + module gudbinta iyo dhagaxa & duudduuban: isku darka AC / DC
Samee kamarad aad iska leedahay